5 Zvishandiso zveRegression Analysis muBhizinesi - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Regression analysis mu bhizimisi inzira yenhamba inoshandiswa kutsvaga hukama pakati pezviviri kana kupfuura zvakazvimiririra uye zvinoenderana. Imwe vhezheni yakazvimirira uye maitiro ayo pane mamwe anotsamira akasiyana anoyerwa. Pakutaura, kune anopfuura gumi emhando dzeregression modhi. Kana paine imwe chete inotsamira uye yakazvimiririra shanduko, kana kufanotaura kuchinjika, isu tinodaidza iri nyore regression. Nekune rimwe divi, kana paine akawanda akazvimirira akasiyana anopesvedzera imwe inotsamira yakasiyana tinoidaidza kuti kuwanda regression.
Ngatizvinzwisisei nemuenzaniso wakapusa. Tomboti une lemonade bhizimisi. Iyo yakapfava mutsara yekudzoreredza chaiyo yehupenyu muenzaniso inogona kureva kuti iwe unowana hukama pakati pemari uye tembiricha, ine saizi yemuenzaniso wemari seyakasiyana inotsamira. Muchiitiko chekudzokororwa kwakawanda, unogona kuwana hukama pakati petembiricha, mitengo uye huwandu hwevashandi kune mari. Nokudaro, regression analysis inogona kuongorora kukanganisa kwezvinhu zvakasiyana-siyana pa bhizimisi kutengesa uye purofiti.
Heano mamwe ekushandiswa kwayo mukati bhizimisi:
Kufarira guru Data analytics? Tora izvo zvazvino kuvandudza, mafambiro uye budiriro needu eBook:
Kufanotaura analytics kureva kufanotaura mikana yeramangwana nenjodzi ndiyo inonyanya kushandiswa yekuongorora kudzokororwa mukati bhizimisi. Ongororo yekuda, semuenzaniso, inofanotaura huwandu hwezvinhu izvo mutengi angangotenga. Nekudaro, kudiwa handiyo chete inotsamira shanduko kana zvasvika bhizimisi. RA inogona kuenda kure kupfuura kufanotaura kukanganisa pamari yakananga. Semuyenzaniso, tinokwanisa kufanotaura nhamba yevatengi vachapfuura pamberi peimwe bhodhi toshandisa data iroro kufungidzira huwandu hwekutenga kushambadza. Makambani einishuwarenzi anovimba zvakanyanya nekuongorora kudzoreredzwa kuti afungidzire chimiro chechikwereti chevaridzi vepolicy uye nhamba inokwanisika yezvikumbiro munguva yakatarwa. Data Science kunzwisisa kwakakosha kwe chokufenbera analytics.
Regression modhi inogona zvakare kushandiswa kugadzirisa bhizimisi maitiro. Maneja wefekitori, semuenzaniso, anogona kugadzira mufananidzo wenhamba kuti unzwisise kukanganisa kwekushisa kweoveni pasherufu yehupenyu hwemakuki akabikwa mumahovhoni iwayo. Munzvimbo yekufona, tinogona kuongorora hukama pakati penguva dzekumirira dzevanofona uye nhamba yekunyunyuta. Kuita sarudzo kunotungamirwa nedata kunobvisa kufungidzira, hypothesis uye zvematongerwo enyika kubva mukuita sarudzo. Izvi zvinovandudza bhizimisi kushanda nekujekesa nzvimbo dzine hukuru hunoita pakushanda kwekushanda uye mari.
Mabhizinesi nhasi akaremerwa nedata pane zvemari, mashandiro uye vatengi kutenga. Kuwedzera, vatungamiriri vava kuzendamira dhata analytics kuita ruzivo bhizimisi zvisarudzo zvine nhamba yakakosha, nokudaro kubvisa intuition uye gut kunzwa. RA inogona kuunza kona yesainzi kune manejimendi echero bhizinesi. Nekudzikisa huwandu hukuru hwe data rakasvibirira kuita ruzivo rwunoita, regression ongororo inotungamira nzira yehungwaru uye dzakanyanya kuita sarudzo. Izvi hazvireve kuti RA magumo kune mamaneja ekugadzira kufunga. Iyi tekinoroji inoshanda sechishandiso chakakwana chekuyedza hypothesis isati yanyura mukuurayiwa.
Regression haina kunaka chete kukweretesa rutsigiro rwesimba kune manejimendi sarudzo asiwo yekuona zvikanganiso mukutonga. Somuenzaniso, a chitoro maneja wechitoro anogona kutenda kuti kuwedzera maawa ekutenga kuchawedzera kutengesa. RA, zvisinei, inogona kuratidza kuti kuwedzera kwemari kunogona kusakwana kutsigira kukwira kwemari yekushandisa nekuda kwemaawa ekushanda akareba (sekuwedzera mari yevashandi). Nekudaro, ongororo iyi inogona kupa tsigiro yehuwandu hwezvisarudzo uye kudzivirira kukanganisa nekuda kwemaneja intuitions.
At NewGenApps, isu tinoshanda mukuita zvine musoro kunze kwedata. Tine timu inoshamisa yevanamazvikokota vane hunyanzvi mumatekinoroji senge Big Data, gore kadambari, AI, ML nezvimwewo. Kana iwe uchitsvaga kambani kuti ikubatsire iwe kuwedzera aya matsva matekinoroji saka inzwa wakasununguka kuti utaure nesu.